အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
Showing posts with label ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ. Show all posts
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Tuesday, November 22, 2011 Tuesday, November 22, 2011 Labels: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
ထမင်းစားခန်းမှာ ညစာပြင်ဆင်နေတဲ့ ကေသီကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်အစဉ်က ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်တာကာလရဲ့ တစ်ခုသော နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပြန်တွေးတော သတိရလိုက်မိပါတယ်.. အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးနေ့။
ကျွန်တော်နဲ့ ကေသီကို သယ်ဆောင်လာတဲ့ မင်္ဂလာကားဟာ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်နေထိုင်မဲ့ တစ်ထပ် တိုက်ပုလေးရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တယ် ဆိုရင်ဘဲ ကျွန်တော်ဟာ ကေသီကို မြတ်နိုး ယုယခြင်း၊ ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်း စသည် တို့နဲ့အတူ ကျွန်တော့် လက်တွေနဲ့ ပွေ့ချီပြီး ခြံဝင်း ရှေ့ကနေ အိမ်ထဲကို ၀င်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန် တုန်းက ကေသီရဲ့ မျက်နှာဟာ ကြည်နူးတဲ့ အလှဆုံး အပြုံးလေးနဲ့အတူ ရှက်သွေးတွေဖြာလို့ သိပ်ကို ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာလည်း ကမ္ဘာမှာ အပျော်ဆုံး သတို့သားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တာပါဘဲ။
အဲဒီနေ့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် မမေ့နိုင်အောင် ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကြည်နူးဖွယ် ရက်စွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထောင်ရေးဟာလည်း သန့်စင်ကြည်လင်နေတဲ့ ရေခွက်ထဲက ရေလိုပါဘဲ.. ကြည်ကြည် လင်လင်နဲ့ စိတ်ချမ်းသာဖို့ သိပ်ကောင်းပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အားကျစရာ အိမ်ထောင်လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ ကြတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ်လောက်အကြာ သားတစ်ယောက် ရလာပြီးနောက်မှာတော့ ကျွန်တော့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်လာခဲ့တယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တဖြေးဖြေး တိုးပွားလာသလို အလုပ်တွေလဲ များလာတယ်.. ကေသီကလည်း ရုံးတစ်ရုံးမှာ ဝန်ထမ်းဆိုတော့ မနက်တိုင်း အလုပ်သွားတာ ညနေမှ ပြန်ရောက်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်လုံး အိမ်ကနေ အတူတူထွက်ဖြစ်ကြပေမဲ့ အလုပ်ရှိရာအရပ်က တစ်ယောက် တစ်လမ်းစီမို့ ကေသီက ဘတ်စ်ကား စောင့်စီးပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ် ကုမ္ပဏီကို ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သားလေးကိုတော့ သူ့ပညာရေးအတွက် ဘော်ဒါတစ်ခုမှာ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား သွားထား ထားတဲ့အတွက် အိမ်မှာ မရှိပါဘူး.. ညနေဆို ကေသီက အိမ်ပြန်ရောက်တာ ပုံမှန်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ အလုပ်များလွန်းတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်က ပုံမှန်အချိန်တိုင်း အိမ်ပြန်နိုင်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ လုပ်ငန်း အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှ အိမ်အတွက် အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘဲ စီးပွားရေး မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဒင်နာသွားစားရတာတွေ၊ ဧည့်ခံ့ပွဲသွားရတာတွေနဲ့ တဖြေးဖြေး အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ နောက်ကျကျလာတယ်.. ကေသီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆုံတွေ့ချိန် နည်းလာတယ်.. ဒီလိုနဲ့ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ကြာလာလေ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ကြားထဲက နွေးထွေးတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဂရုစိုက် ကြင်နာမှုတွေဟာ ဒီရေကျသလို တစ်ဖြေးဖြေး ကျဆင်းလာတယ်.။ အားကျစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းဟာ အေးစက် လာခဲ့တော့တယ်.. အိမ်ပြန်ချိန် နောက်ကျတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို ကေသီက ထူးထူးခြားခြား ဘာမှမေးလေ့မရှိဘဲ ဘာသိဘာသာ နေလေ့ရှိတယ်။ ကေသီက ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်လွန်းတာဘဲလား။ ဥပက္ခာ ပြုထားတာဘဲလား သွေးအေးလွန်းတာဘဲလား ကျွန်တော် သေချာ မခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ဘူး။ ကေသီ ကျွန်တော့်ကို မချစ်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့၂ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေ အေးခဲသွားချိန်မှာ ကျွန်တော့်ဘ၀ထဲကို ဂျူလီ ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်.. ဂျူလီဟာ တည်ငြိမ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ကို ယိမ်းယိုင်သွားဖို့ အစပျိုးလာပါတော့တယ်... ချစ်စရာကောင်းပြီး ငယ်ရွယ်ချောမောတဲ့ ဂျူလီဟာ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကျွန်တော်နဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုး သွယ်မိခဲ့ကြတာပါ။ ကေသီနဲ့ဆို အေးစက်ပြီးရင်ခုန်ဖို့ မေ့လျော့နေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် နှလုံးသားဟာ ဂျူလီရဲ့ အချစ်ကြောင့် တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီး ရင်ခုန်တတ်ခဲ့ပါပြီ.. အချစ်ဆိုတာကို ပြန်ပြီး ခံစားတတ်လာပါတယ်။ ဂျူလီကလည်း သိပ်ကို ကြင်နာတတ်သလို၊ အယုအယကလဲ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ စကားကိုလဲ ချိုအီနေအောင် ပြောတတ်တော့ ကျွန်တော့် စိတ်အာရုံ အားလုံး ဂျူလီ့အပေါ် ပုံကျသွားခဲ့တာပါဘဲ။
တစ်ရက်မှာ တိုက်ခန်းက ၀ရံတာလေးမှာ ထွက်ရပ်ပြီး ကျွန်တော် အတွေးနက်နေတုန်း ဂျူလီက ကျွန်တော့်ရဲ့ အနောက်ကနေ သိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်.. ဒီတိုက်ခန်းဟာ ဂျူလီအတွက် ကျွန်တော် ၀ယ်ထားပေးတဲ့တိုက်ခန်းပါ။ ဂျူလီက “ကိုက အရမ်းချောတာဘဲ.. မိန်းခလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို ကောင်းကောင်းကြီး ဆွဲဆောင်ထားနိုင်စွမ်း ရှိတဲ့သူဘဲနော်.. ဒါကြောင့်လဲ ဂျူလီက ကို့ကို သိပ်ချစ်မိတာပေါ့” လို့ တိုးတိုးလေးနဲ့ ကပ်ချွဲပြီးပြောလိုက်တော့ သူ့ရဲ့ စကားလုံးတွေက ကျွန်တော့်ဇနီး ကေသီကို ရုတ်တရက် အမှတ်ရသွားစေခဲ့ပါတယ်.. ကေသီနဲ့ကျွန်တော် အိမ်ထောင်ဦးကာလတုန်းကလည်း ကေသီက ကျွန်တော့်ကို “ မောင်ဟာ မိန်းခလေးတွေအတွက် အတော့်ကို ဆွဲဆောင်အားကောင်းတဲ့သူ.. ကေသီတော့ စိတ်မချ ဖြစ်နေရ ဦးတော့မယ်” လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. ဒီစကားကို ပြန်သတိရမိတော့ ကေသီကို သစ္စာဖောက် မိတာ နောင်တရမိ သလို ဖြစ်သွားရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အေးစက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပြန် လည်ပြီး နွေးထွေး လာဖို့လဲ မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့ပါဘူး… ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ငယ်ရွယ်လှပပြီး တီတီတာတာ ပြောတတ်တဲ့ ဂျူလီကို ချစ်နေမိပြီပဲလေ။
ကျွန်တော် ဂျူလီနဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင် ရပ်လိုက်ပြီး “ဂျူလီ.. တိုက်ခန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပရိဘောဂတွေ သွားဝယ်မယ်ဆို သွားလေ။ ကိုယ် အလုပ်ရှိသေးလို့ ကုမ္ပဏီကို ပြန်သွားလိုက်ဦးမယ်..” ကျွန်တော့် စကားကို ကြားတော့ ဂျူလီရဲ့ မျက်နှာ ညှိုးသွားပါတယ်။ ပရိဘောဂဆိုင်ကို ကျွန်တော်တို့၂ယောက် အတူ သွားကြမယ်လို့ သူ့ကို ကတိပေးထားခဲ့တာကြောင့် ၂ယောက် အတူတူ သွားလိမ့်မယ်လို့ ဂျူလီက မျှော်လင့်ထားတာပါ။ မကြာခင်မှာ ကေသီ့ကို ကျွန်တော်နဲ့ ဂျူလီအကြောင်း ဖွင့်ပြောပြီး တရားဝင် ကွာရှင်းမယ်.. ပြီးရင် ဂျူလီနဲ့ အတူတူ နေကြမယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ စီစဉ်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ ခက်နေတာက တကယ်တမ်း ကျွန်တော် ကေသီကို ကွာရှင်းစကား စပြောဖို့ ဆိုတာ ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်.. ဘယ်လောက်ဘဲ တတ်နိုင်သလောက် ညင်ညင် သာသာ ဖြစ်အောင် ပြောပြော ကေသီအတွက်တော့ အပြင်းအထန် နာကျင်ခံစားရမှာပါဘဲ.. ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ ကြားမှာ ဟိုးအရင် အိမ်ထောင်ဦး ဘ၀ကလို ရင်ခုန်လှိုက်မောစွာနဲ့ ပူနွေးတဲ့ အချစ်မျိုး မရှိကြတော့ တာက လွဲလို့ ကေသီဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သိပ်ကို ကောင်းတဲ့ ဇနီးတစ်ယောက်ပါ။
ကျွန်တော်ကြိုက်တတ်တဲ့ မနက်စာကို ကျွန်တော်မထခင် သူတစ်ယောက်တည်း စောစောထပြီး အမြဲတမ်း ပြင်ဆင်ထားတတ်သလို ညနေလဲ ရုံးကနေလဲ အချိန်မှန် ပြန်ရောက်ပြီး ဘယ်လောက်တောင် အလုပ် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်စေ မနားနိုင်ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်အတွက် ညစာကို ကျွန်တော်စားသည်ဖြစ်စေ၊ မစားဖြစ်သည်ဖြစ်စေ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ စောစောပြန်ရောက်တဲ့ နေ့မှာတောင် သူ့ကို ကူဖော်မရဘဲ တီဗီရှေ့မှာထိုင်၊ တီဗီကြည့်ရင်း ကေသီချက်ပြုတ်ပြီးချိန်ထိ စောင့်နေတတ်ပါတယ်.. စားသောက်ပြီးတော့မှ တီဗီဆက်ကြည့်ရင်ကြည့်၊ မကြည့်ရင်လဲ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အလုပ်များသလိုလိုနဲ့ ထိုင်နေပြီး ဂျူလီ့မျက်နှာလေးကို မှန်းဆကာ သူ့အကြောင်းလေးတွေ တွေးရင်း သူ့ကို သတိရနေ တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကွာရှင်းစကားပြောဖို့တော့ ကျွန်တော့်နှုတ်က ထွက်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းတာတော့ အမှန်ပါ။
ဒီကြားထဲမှာ ကျွန်တော် ကေသီကို နောက်သလိုလိုနဲ့ စကား စကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. “ကေသီ တကယ်လို့များ ကေသီ့ကို မောင်က ကွာရှင်းခွင့်တောင်းမယ်ဆိုရင် ကေသီဘာလုပ်မလဲ ”လို့ ရယ်မော ရင်းနဲ့ သွေးတိုးစမ်းရင်း လှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ကေသီက ကျွန်တော့ကို အချိန်တော်တော်လေး ကြာအောင် စိုက်ပြီး ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ စကားတစ်ခွန်းမှတော့ ပြန်မပြောပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒီစကား ဟာ နောက်ပြောင်တဲ့ စကား ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘဲ ယုံကြည်ပုံ ရပါတယ်.. ဒါနဲ့တောင် ကေသီ့ မျက်ဝန်းလေးတွေမှာ မျက်ရည်စတွေနဲ့ လက်ခနဲ ဖြစ်သွားပြီး မှုန်မှိုင်းသွားပါတယ်.. စကားတစ်ခွန်းမှတောင် ခွန်းတုံ့ မပြန်နိုင်ပါဘူး.. ကျွန်တော် ကွာရှင်းမဲ့ ကိစ္စကို အတည်သာပြောမယ်ဆိုရင် ကေသီ ဘယ်လောက်များ ခံစားရမှာပါလဲ။ ကေသီ ဘယ်လိုများ တုံ့ပြန်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် မှန်းဆလို့တောင် မရပါဘူး။
တစ်ရက်မှာ ကေသီဟာ သူတို့ရုံးကိစ္စတစ်ခုနဲ့ အပြင်ထွက်လာရင်း ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီကို ရောက်လာပါတယ်.. ကံကောင်းတာက အဲဒီအချိန်မှာ ဂျူလီက အပြင်ထွက်သွားချိန် ဖြစ်နေပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကေသီဟာ ကျွန်တော့် ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်က စာနာသနားတဲ့ ဂရုဏာအရိပ်အယောင်တွေ၊ ဖွင့်ဟမပြောပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ဖုံးကွယ်ထားပုံရတဲ့ မျက်ဝန်းတွေဆီကနေ သင်္ကာမကင်းဖြစ်စရာ အရိပ်အယောင်တစ်ခုခုကို ရှာတွေ့သွားပုံ ရခဲ့ပါတယ်.. သူဟာ ၀န်ထမ်းတွေကို ညင်ညင်သာသာလေး ပြုံးပြပြီး စကားပြောနေခဲ့ပေမဲ့လို့ သူ့မျက်ဝန်းတွေ မှာတော့ နာကျင်တဲ့ ခါးသီးမှုတစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း နာကျင်နေပုံရတဲ့ ကေသီမျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်ပြီး ၀မ်းနည်းလာမိပါတယ်.. ကေသီကို ကျွန်တော်မချစ်တော့ပေမဲ့ ရက်စက်နိုင်တဲ့စိတ်လည်း ကျွန်တော့်မှာ မရှိပါဘူး။ ကေသီဟာ ပြန်ခါနီးကျတော့ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်သွားတဲ့ အကြည့်တွေထဲမှာ အဓိပ္ပါယ်တစ်ချို့ ပါဝင်တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်.. နာကျင်ရိပ် တစ်ချို့နဲ့အတူ တောင်းပန်ရိပ်လေးတွေ စွက်နေခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်စိတ်ထဲ ခံစားနားလည်မိလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲဖို့ ခုချိန်ထိ ပြတ်ပြတ်သားသား မလုပ်သေးဘဲ အချိန်ဆွဲနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဂျူလီကလည်း တစ်ချိန်လုံး ဖိအားတွေ ပေးလာနေပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဘဲ ကေသီကို ဖွင့်ပြောဖို့ ဂျူလီက ရာဇသံပေးပါတယ်.. ကျွန်တော်လည်း ပြတ်သားဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဒီတစ်ပတ်မှာ ပြောပါမယ်လို့ ဂျူလီကို ကတိပေးလိုက် ပါတော့တယ်.. ဖွင့်ပြောဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ တစ်ရက်မှာတော့ ကေသီပြင်ဆင်ကျွေးမွေးတဲ့ ညနေစာကို စားသောက်ပြီးချိန်မှာ ကျွန်တော် သူ့လက်ကို အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး “ကေသီ မင်းကို မောင်ပြောစရာရှိတယ်..” လို့ စကားစ လိုက်ပါတယ်... ဒီအခါ ပန်းကန်သိမ်းဖို့ ပြင်နေတဲ့ ကေသီဟာ ထမင်းစားပွဲက ထိုင်ခုံမှာ ပြန်ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဘာမှ မမေး ၊ စကားလည်း တစ်ခွန်းမှ မဆိုဘဲ သူရှေ့က စားပွဲခင်းကိုသာ စိုက်ကြည့်နေပါတယ်.. သူ့မျက်ဝန်းတွေထဲက နာကျင်ရိပ်တွေကို ကျွန်တော် တွေ့မြင်လိုက်ရပြန်ပါပြီ။ ကျွန်တော် ဘာပြောမယ်ဆိုတာ ကေသီ ရိပ်များ ရိပ်မိနေမလား… စဉ်းစားရင်း ကျွန်တော်ပါးစပ်က ကွာရှင်းဖို့ကိစ္စကို ပြောထွက်ဖို့ ချက်ခြင်းဘဲ ဝန်လေး သွားရပြန်ပါပြီ.. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တွေဝေနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး ပြောကိုပြောမှ ဖြစ်တော့မယ်.. ဂျူလီကလဲ ကျွန်တော်နဲ့ အမြဲတမ်း အတူတူနေချင်လှပြီ.. ခုလိုတစ်ခါတစ်လေမှ တွေ့ရတဲ့ ဘ၀ကို သူမကျေနပ်နိုင်တော့ဘူး.. ကျွန်တော် ကေသီကို တရားဝင်ကွာရှင်းပြီး ဂျူလီနဲ့ဘဲ ဘ၀အသစ်ကို စတော့မယ်.. ဒီလိုတွေးမိလိုက်ပြီး အားပြန်တင်းရင်း ကေသီ့ကို ကျွန်တော် ပြောချလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်စကားကို ကြားတဲ့ ကေသီဟာ ထူးထူးခြားခြား တုန်လှုပ်ဟန်၊ အံ့သြဟန်လဲ မပြဘူး.. ဒါပေမဲ့ သူ့မျက်ဝန်းကနေတော့ မျက်ရည်တွေ စီးကျလာခဲ့ပါတယ်.. ပြီးတော့ ကြေကွဲ ဆို့နင့်နေတဲ့ အသံနဲ့ “အကြောင်းပြ ချက်က ဘာကြောင့်လဲမောင် .. မောင့်အပေါ် ဘာတွေများ တာဝန်မကျေလို့လဲ.. ကေသီ့ဘက်က မယားဝတ္တရား ပျက်ကွက်တာ ဘာများ ရှိခဲ့လို့လဲ… ” မမျှော်လင့်ဘဲ ကြားလိုက်ရတဲ့ ကေသီ့မေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေဖို့ ကျွန်တော် ဆွံ့အသွားပါတယ်.. ကျွန်တော်ထင်တာက ကျွန်တော့် စကားကို ကြားရင် ကေသီဟာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရန်တွေ့မယ်၊ ငိုယိုပြီး ကျွန်တော့်ကို ထုရိုက်မယ်၊ တွေ့ရာနဲ့ ကောက်ပေါက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ တွေးထင်မထားခဲ့တာကြောင့် ကေသီကို ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်.. ကျွန်တော့်မျက်နှာကို မျက်ရည်တွေကြားကနေ အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြီး ကျွန်တော့် အဖြေကို ကေသီက စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်ဆီက ဘာစကားသံမှ ထွက်မလာတဲ့အဆုံး “ကောင်းပြီလေ.. ကွာရှင်းဖို့ကို မောင့်ဘက်က တကယ် လိုလားနေတယ် ဆိုမှတော့ မောင့်စိတ်တိုင်းကျသာ ဆုံးဖြတ်ပါ…” လို့ ပြောပြီး နာနာကျင်ကျင် ရှိုက်သံတွေ၊ မျက်ရည်တွေနဲ့ ကေသီ ထမင်းစားခန်းထဲကနေ ပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို ကေသီရောက်မလာပါဘူး။ အခန်းပိုတစ်ခုမှာ သူ့တစ်ယောက်တည်း သွားအိပ်ပုံ ရပါတယ်။ သေချာတာက ကေသီဟာ တစ်ညလုံး ငိုကြွေးနေမှာ သေချာပါတယ်။ အကြောင်းပြချက် မပေးပေမဲ့ ကေသီ နားလည်မယ်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကေသီနဲ့ပတ်သက်ရင် အေးစက်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို သူမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ ခုချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့ အသည်းနှလုံးက ဂျူလီအတွက်သာ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဂျူလီဟာ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံ မြန်အောင်ပြုစားနိုင်တဲ့ နတ်သမီးတစ်ပါးပါ။ ဂျူလီနဲ့ဆို ကျွန်တော် သိပ်ကိုပျော်မယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာ မလိုပါဘူး။
နောက်ရက်ကစပြီး ကျွန်တော်ဟာ ကေသီနဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲဖို့ကိစ္စကို စ ပြင်ဆင်ပါတယ်. ကွာရှင်းစာချုပ်တစ်စောင် အကြမ်းရေးပြီး ကေသီ့ကို ကျွန်တော် ပြလိုက်တယ်.. အဲဒီစာချုပ်ထဲမှာ အခုလက်ရှိ ကျွန်တော်နဲ့ ကေသီနေတဲ့ အိမ်ရယ်၊ ကျွန်တော်စီးနေတဲ့ကားရယ်၊ ကျွန်တော့် ကုမ္ပဏီရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ၃၀% ရယ်ကို ကေသီ့ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးကြောင်း ထည့်ရေးထားတာပါ။ ကျွန်တော်ပြတဲ့ စာချုပ်အကြမ်းကို ကေသီက ဖြတ်ခနဲ တစ်ချက်သာ ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးနောက်တော့ တစ်စစီ ဆွဲဆုတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ရှုံးပွဲချ ငိုကြွေးပါတော့ တယ်။ ကြေကြေကွဲကွဲ ငိုကြွေးနေတဲ့ ကေသီကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော့ရင်ထဲမှာလဲ တစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ နာကျင်နေသလို ခံစားမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုခု နှစ်သိမ့်ဖို့ ကျွန်တော် မကြိုးစားချင်တော့ပါဘူး။ စိတ်ရှိလက်ရှိ ငိုကြွေးလိုက်တာက သူ့ရင်ထဲမှာ ခံစားနေတာတွေ နည်းနည်းတော့ ဖြစ်ဖြစ် သက်သာသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်.. ခုလိုဆိုတော့ ဂျူလီအတွက်ကြောင့် ၁၀နှစ်ကျော်ကြာအောင် ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ သူစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်ရတော့မှာကို တွေးမိတော့လည်း ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းမိပြီး တစ်စုံတစ်ရာကို ဆုံးရှုံးသလိုမျိုး ခံစားရတာတော့ အမှန်ပါ။ ကွာရှင်းဖို့ စီစဉ်နေရပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တစ်ခုခု ကျူးလွန်နေမိတယ်လို့ခံစားနေမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် နောက်ဆုတ်လို့လဲ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကေသီ့အပေါ် မတရားမှန်း သိပေမဲ့ ဂျူလီရဲ့ အချစ်ကိုလည်း ကျွန်တော် မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ ဂျူလီနဲ့နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသား ဖြစ်နေခဲ့ပြီပဲလေ။
အဲဒီညမှာ ကေသီဟာ စာရေးစားပွဲပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး တစ်စုံတစ်ခုကို ရေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်.. ညတစ်ရေးနိုးလို့ ရေထသောက်ချိန်ထိလဲ အဲဒီစားပွဲမှာ သူရှိနေတုန်းပါ။ ကျွန်တော် ပြန်အိပ်ပျော်သွားပြီးလို့ မိုးလင်းတော့ မနက်စာ စားချိန်မှာ ကေသီဟာ သူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ် အကြမ်းတစ်စောင်ကို လာပြပါတယ်.. သူ့စာချုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့အတွက် ဘယ်လိုရပိုင်ခွင့်မျိုးကိုမှ သူယူမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ မကွာရှင်းခင် တစ်လတိတိ အချိန်ပေးပြီး သူနဲ့အတူတူ ယခင်ကအတိုင်း ပုံမှန်အနေအထားမျိုး အတတ်နိုင်ဆုံး နေပေးဖို့ တောင်းဆိုထားပါတယ်။ သူ့အကြောင်းပြချက်က ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ သားလေးဟာ နောက်၃ရက်လောက်ဆို နွေရာသီ ကျောင်းတစ်လပိတ်တာမို့ အဆောင်ကနေ အိမ်ကိုပြန်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စကို သားရှေ့မှာ မဖြစ်စေချင်တာကြောင့် သားရှိနေတဲ့ ဒီတစ်လ အချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့၂ယောက် ဘာမှ မဖြစ်သလို ပုံမှန်အတိုင်း နေပြချင်တယ် လို့ ကေသီက တောင်းဆို ပါတယ်။ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်တဲ့ ကေသီရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို ကျွန်တော်လဲ လျောလျောရှူရှူ လက်ခံလိုက် ပါတယ်။
ကေသီက ကျွန်တော့်ကို “မောင်… ကေသီတို့ ၂ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးရက်တုန်းက ကေသီ ဒီအိမ်ထဲကို ဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာ မောင်မှတ်မိသေးလား” လို့တိုးဖွ ညင်သာတဲ့ အသံလေးနဲ့ မေးလိုက် တဲ့ ကေသီရဲ့ လေသံနဲ့ မေးခွန်းက ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဦးရက်ကို ပြန်အမှတ်ရ သွားစေခဲ့ ပါတယ်.. “မောင်.. မှတ်မိပါတယ်” လို့ ခေါင်းညိတ်ပြီး ပြန်ပြောလိုက်တော့ ကေသီက ဆက်ပြီးပြောပါတယ်.. “အဲဒီနေ့တုန်းက မောင်က ကေသီ့ကို ပွေ့ချီပြီး ကားပေါ်ကနေ အိမ်ထဲ ခေါ်လာခဲ့တာလေ။ ခုထိ ကေသီမှတ်မိနေပါတယ်။ မောင့်ကို ကေသီတစ်ခု တောင်းဆိုချင်တာက မောင်နဲ့ မကွာရှင်းခင် အတူတူနေခွင့်ရတဲ့ ဒီတစ်လအတွင်းမှာ မောင်ရော ကေသီရော အလုပ်ကို သွားကြတဲ့ မနက်တိုင်း အိမ်ခန်းထဲကနေ ခြံဝင်းထိ မောင်က ကေသီ့ကို ပွေ့ချီသွားပေးပါ။ သားလေး ပြန်ရောက်တဲ့ နေ့ကစလို့ ကေသီတို့ လမ်းခွဲကြမဲ့ နောက် တစ်လတိတိကို နေ့တိုင်း မပျက်မကွက် လုပ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်.. ဒါလေးကို မောင် လိုက်လျောပေးနိုင်မလားဟင်” ကေသီရဲ့ တောင်းဆိုစကားကို ကြားရတော့ ကျွန်တော် တွေဝေ တုံ့ဆိုင်းနေခြင်း မရှိဘဲ လိုက်လျောဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်.. ရက်ရက်စက်စက် ချန်ထားခြင်းခံရမဲ့ ကေသီအတွက် ဒီလောက်တော့ လိုက်လျောဖို့ သင့်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော် တွေးလိုက်မိပါတယ်။ ကေသီဟာ မင်္ဂလာဦး ကာလတုန်းက ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေကို ပြန်သတိရပြီး အခု ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရတွေနဲ့သာ အဆုံးသတ်ချင်ပုံရပါတယ်..
ကျွန်တော်က ကေသီရဲ့ တောင်းဆိုချက် အကြောင်းကို ဂျူလီ့ကို ပြောပြပြီး တစ်လလောက် စောင့်ပေး ဖို့ ပြောလိုက်တော့ ဂျူလီက မျက်နှာကို တစ်ချက်မဲ့လိုက်ပြီး အားရပါးရ ရယ်မောပါတယ်… ပြီးတော့ “ဒါ သက်သက် ညစ်တာ… ကို့မိန်းမက ဘာတွေ ပရိယာယ်ဆင်ဦးမလို့လဲ မသိဘူး.. အို.. သူဘာဘဲ လုပ်လုပ်လေ နောက်ဆုံးတော့ ကွာရှင်းတာကိုဘဲ သူခံရမှာပါ။ ရပါတယ် တစ်လလောက် ထပ်စောင့်ရလဲ ဂျူလီစောင့်ပါမယ်” လို့ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်စွာနဲ့ အခိုင်အမာ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ဂျူလီရဲ့ စကားက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ကသိ ကအောက် ဖြစ်စေပြီး ကေသီအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်.. တကယ် တမ်းတော့ ကျွန်တော် ကွာရှင်းချင်တယ် ဆိုပေမဲ့ ကေသီ့မှာ ဘာမှ အပြစ်မရှိရှာပါဘူး… ဂျူလီကို ချစ်မိတဲ့ အကြောင်း တစ်ခုတည်းနဲ့ ကေသီကို ကျွန်တော် ထားခဲ့ရမှာပါ။
အရင်ကတည်းက ကေသီနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ မင်္ဂလာဦး ကာလတွေတုန်းကလို ယုယုယယနဲ့ သည်းသည်းလှုပ် ဖြစ်မနေတော့ဘဲ အေးစက်စက် ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပြီဆိုပေမဲလို့ စိမ်းစိမ်းကားကား ဖြစ်တာမျိုး မရှိခဲ့ဘဲ ကြပေမဲ့ ကွာရှင်းဖို့ကိစ္စ ဖွင့်ပြော လိုက်တဲ့နေ့ကစလို့ ကေသီနဲ့ ကျွန်တော့်အကြားမှာ အရိပ်မဲကြီး တစ်ခု ခြားသွားခဲ့သလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကေသီရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာလည်း အပြုံးတစ်စကိုမှ မတွေ့ ရတော့ဘဲ ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေတဲ့ မျက်နှာကိုသာ တွေ့ရတော့တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကားပြောဖို့ ကိုလည်း ရှောင်လွှဲနေခဲ့ကြတော့ တကယ့်ကို တစိမ်းပြင်ပြင် ဖြစ်သွားကြသလိုပါဘဲ။
သားပြန်ရောက်လာတဲ့ ပထမဆုံးနေ့ ရုံးသွားချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက် သဘောတူထားတဲ့ အတိုင်း ကေသီကို အခန်းထဲကနေ အိမ်ရှေ့ခြံဝင်း တံခါးပေါက်ထိ ကျွန်တော် ပွေ့ချီလာတော့ ၂ယောက်လုံးက နူးညံ့ ပျော့ပြောင်း မနေခဲ့ဘဲ တောင့် တောင့်ကြီးတွေ ဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခုလို ကြင်ကြင်နာနာ၊ ယုယုယယ မနေဖြစ်ခဲ့တာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့ နွေးနွေးထွေးထွေးတောင် မနေတတ်တော့ သလိုပါဘဲ။ ဘာမှ မသိရှာတဲ့ သားလေးကတော့ “ဟေး… ဖေဖေက မေမေ့ကို ပွေ့ထားတယ်ကွ” လို့ အော်ဟစ်ပြီး ဝမ်းသာအားရ လက်ခုပ်လေး တီးရှာပါတယ်။ သားရဲ့ အသံက ကျွန်တော့် အသည်းနှလုံးကို ဖျစ်ညှစ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အိမ်ရှေ့ခြံဝင်းထဲရောက်ချိန်မှာ “ကွာရှင်းမဲ့ကိစ္စ သားလေး မသိပါစေနဲ့ဦးနာ်” လို့ ကေသီက တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်တော့ သူ့ကိုပွေ့ချီထားရက်နဲ့ ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီး “စိတ်ချပါကွာ” လို့ ပြောလိုက်ပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ မသက်မသာ ခံစားနေရတာ အမှန်ပါဘဲ.. ခြံရှေ့ရောက်တော့ ကေသီကို ချပေးလိုက်ပြီး ကားပေါ် မောင်းတက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်.. ကေသီကတော့ ခပ်နှေးနှေး ခြေလျမ်းတွေနဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို ထွက်ခွာသွားပါတယ်။
နောက်နေ့တွေမှာတော့ ပထမဆုံးနေ့ကလို ခပ်တောင့်တောင့် ဖြစ်မနေကြတော့ဘဲ ကေသီ့ကို ပွေ့ချီရတာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိလာတယ်.. ကေသီကလည်း ကျွန်တော်ရဲ့ လည်ပင်းကို ပြန်ပြီး သိုင်းဖက်လာ တတ်တယ်.. ကေသီရဲ့ အင်္ကျီမှာ ဆွတ်ထားတဲ့ ရေမွှေးနံ့လေးကိုတောင် ကျွန်တော့ နှာဝမှာ အတိုင်းသား ရှုရှိုက်နေရတယ်.. အဲဒီရေမွှေးနံ့ကို ရလိုက်တော့မှ ကေသီ့ကို ရေမွှေးပုလင်း မ၀ယ်ပေးဖြစ်တာ ဘယ်နှနှစ် ရှိသွားပြီလဲ ဆိုတာကို ပြန်စဉ်းစားတော့ ဘယ်လောက် ကြာသွားပြီဆိုတာ မှတ်ကိုမမှတ်မိတော့.. ဟိုအရင်တုန်း ကတော့ ကေသီ ကြိုက်တတ်တဲ့ ရေမွှေးပုလင်းတွေတိုင်း ကျွန်တော် ၀ယ်ပေးခဲ့တာချည်းပါဘဲ.. တစ်အိမ်ထဲ နေကြပေမဲ့လို့ ကေသီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ကျွန်တော် သတိမထားဖြစ်တာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိလိုက်ရတယ်။ သက်ပြင်းကိုဖွဖွ ချလိုက်မိတော့ ကေသီက ကျွန်တော့် မျက်နှာကို မော့ကြည့်လာတယ်.. ကျွန်တော်လဲ ကေသီ့မျက်နှာကို ပြန်ငုံ့ကြည့်မိ လိုက်ပြန်တယ်.. ဒီတော့မှ သတိထား လိုက်မိတာက ကေသီဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ် ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဦးချိန်တွေတုန်းကလို ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မဟုတ်တော့ပါဘဲလား။ ကေသီရဲ့ မျက်နှာနဲ့ မျက်လုံးထောင့်တွေမှာ အရေးအကြောင်း တစ်ချို့ ထင်စပြုနေခဲ့ပြီ။ လှပတဲ့ ကေသီ့မျက်နှာဟာ နုပျိုသစ်လွင်ပြီး တက်ကြွတဲ့ အလှမျိုး မဟုတ်တော့ပေမဲ့ ရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့အတူ ကျက်သရေရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ အလှကို ထပ်ဆောင်းထားခဲ့ပြီ။
နောက် တစ်တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ ကေသီကို ကျွန်တော်ပွေ့ချီလိုက်တော့ ကေသီက “ညတုန်းက မိုးရွာထားတာ ခြံထဲက ကျောက်ပြားက ချောနေတယ်.. သတိထားနော်” လို့ တိုးတိုးလေး သတိပေး စကားကို ပြောလာတယ်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ နွေးကနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး ကြည်နူး စိတ်ကလေး နဲ့ ကေသီ့ကို ပြုံးလိုက်တော့ ကေသီက မျက်နှာနီပြီး ခေါင်းကို ငုံ့သွားခဲ့ တယ်။ ကေသီ့ကို ပွေ့ထားရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ ပထမနေ့တုန်းကလို တာဝန်အရ လုပ်ရတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ တကယ့်ကို စိတ်ပါ လက်ပါ ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီအကြောင်းတွေကို ဂျူလီကို ကျွန်တော်လုံးဝ မပြောမိဘူး။ ဂျူလီရဲ့ “ဘာတွေထူးခြားသေးလဲ” ဆိုတဲ့ အမေးကို ဘာမှ “မထူးခြားပါဘူးကွာ” ဆိုပြီး ခပ်ပေါ့ပေါ့ အဖြေကိုသာ ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရက် ၂၀လောက်ကြာတော့ မနက် ရုံးသွားကြဖို့ အဝတ်လဲနေတဲ့ ကေသီ့ကို ပွေ့ချီဖို့စောင့်ရင်း ကျွန်တော်က “ကေသီ မင်းကို ပွေ့ရတာ အရင်ကထက်စာရင် ပိုပြီးပေါ့သွားသလိုဘဲ။ မောင်က ပိုပြီး အားရှိလာလို့ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်နော်” လို့ နောက်ပြီး ပြောလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ ကေသီက အ၀တ်တွေ တစ်စုံပြီးတစ်စုံ ရွေးနေရင်း သူနဲ့တော်တဲ့ အင်္ကျီကို ရှာမတွေ့ဖြစ်နေဟန်နဲ့ သက်ပြင်းချလိုက်ပြီး “အင်္ကျီတွေလဲ တစ်နေ့တစ်နေ့ ပိုကြီးကြီးလာတယ်ထင်တယ်.. ကျွန်မနဲ့ တော်တဲ့အင်္ကျီ ရှာမရတော့ဘူး.”. လို့ ညီးတွားလိုက်တော့ ကျွန်တော်က ပြုံးလိုက်မိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကေသီ့ကို သေချာကြည့်လိုက်တော့မှ ကျွန်တော် သဘောပေါက် လိုက်မိပါတော့တယ်။ ကေသီဟာ တော်တော့်ကို ပိန်သွားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်က ပိုပြီး အားကောင်း သန်မာလာလို့ မဟုတ်ဘဲ ကေသီကသာ ကျွန်တော်ပွေ့ကာစ အရင် နေ့တွေထက်စာရင် အများကြီး ပိန်သွားတာမို့ သူ့ဝတ်စုံတွေက သူနဲ့ မတော်တော့ဘဲ ကြီးနေခဲ့တာပါ။ ကေသီဟာ ဘာမှ မဖြစ်သလို ဟန်ဆောင်ထားပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်နဲ့ ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စအတွက် သူ့နှလုံးသားမှာ အင်မတန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးနှက်ခံစားရပုံ ပေါ်ပါတယ်။
ပိန်သွားတဲ့ ကေသီ့ခန္ဓ္ဓာကိုယ် သွယ်လျလျကိုကြည့်ပြီး ကေသီ ဘယ်လောက်များ စိတ်ဆင်းရဲနေခဲ့ပါလိမ့် လို့ တွေးမိကာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေ တစ်လှိုက်လှိုက် တက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကေသီ့ခေါင်းကလေးကို ကြင်နာစိတ်ကလေးနဲ့ လှမ်းကိုင်လိုက်ဖို့ လက်ရွယ်လိုက်တုန်းမှာ သားလေးက အခန်းထဲကို ရုတ်တရက် ရောက်လာပြီး “ဖေဖေ.... မေ့မေ့ကိုပွေ့ချီပြီး အလုပ်သွားဖို့ အချိန်ရောက်ပြီလေ” လို့ သတိပေးစကား ပြောလာပါတယ်။ သားလေးကြည့်ရတာ သူ့အဖေဟာ အမေဖြစ်သူကို ပွေ့ပြီး အလုပ်သွားတာကို အမြဲတမ်းတွေ့နေရမဲ့ မြင်ကွင်းလို့ ထင်မှတ်ထားပုံရပါတယ်.. ကေသီက သားလေးအနားကို တိုးကပ်သွားပြီး တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီမြင်ကွင်းကို ကြည့်ဖို့ အင်အားမရှိတော့တာကြောင့် မျက်နှာလွဲပစ်လိုက် မိပါတော့တယ်.. နောက်ဆုံး အချိန်နားနီးလာမှ ဆုံးဖြတ်ပြီးသား ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ပြန်ပြောင်းလဲသွားမှာကိုလဲ စိုးထိတ်နေမိပါတယ်။ ခနကြာတော့ ကေသီ့ကိုယ်လေးကို ကျွန်တော် ပွေ့ချီ လိုက်ပြီး အိပ်ခန်းကနေ ခြံဝင်းတံခါးထိ လျှောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ခါတိုင်းလိုဘဲ ကေသီက ကျွန်တော့် လည်ပင်းကို သိုင်းဖက်ထားပါတယ်.. ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဦးနေ့ ကို ပြန်သတိရနေ မိပေမဲ့ ကေသီရဲ့ ခန္ဓ္ဓာကိုယ်ကတော့ မင်္ဂလာဦး အချိန်တွေ တုန်းကထက် ပိုပြီး ပါးလျား ပေါ့ပါး သွားခဲ့ပြီ။ ဒီအဖြစ်က ကျွန်တော်ကို ထိထိခိုက်ခိုက် ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းစေပါတယ်..
ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေး နောက်ဆုံးနေ့ပါဘဲ… ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ပြီမို့ ညနေဆိုရင် သားလေးဟာ သူနေတဲ့ အဆောင်ကို ပြန်ရတော့မယ်.. ကျွန်တော်တို့ ၂ယောက်အတွက် နောက်ဆုံးနေ့မှန်း သိနေတော့ ကေသီ့ကို ပွေ့ချီထားတဲ့ ကျွန်တော့် လက်တွေဟာ ခွန်အားမဲ့နေ သလို ဖြစ်နေပြီး ခြေထောက်တွေ ကလည်း ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းဖို့တောင် အနိုင်နိုင် ဖြစ်နေခဲ့မိတယ်။ ကျွန်တော့်လည်ပင်းကို သိုင်းဖက် ထား တဲ့ ကေသီရဲ့ လက်ဖျားလေးတွေ ဟာလည်း အေးစက်နေတာပါဘဲ။ တစ်ညလုံး ငိုကြွေးထားပုံရတဲ့ ကေသီရဲ့ မျက်ဝန်း တွေဟာလည်း နီရဲလို့ နေခဲ့တယ်။ သူ့ကိုပွေ့ချီလာတဲ့ လမ်း တစ်လျှောက်မှာ ကေသီ ကျွန်တော့်ကို “ကေသီ စိတ်ထဲမှာ ကေသီတို့ ၂ယောက်လုံး မင်္ဂလာဦးနေ့ တုန်းကလိုဘဲ အသက်ကြီးတဲ့ အချိန်ထိ ကေသီ့ကို မောင့် လက်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းပွေ့ချီလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားခဲ့မိတယ်” လို့ ကြေကြေကွဲကွဲ တုန်ရီ ဆို့နင့်တဲ့ အသံနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကေသီဟာ ကုန်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ရွှေရောင်နေ့ရက်လေးတွေကို နှမြော တမ်းတစွာနဲ့ လွမ်းဆွတ်နေမှာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော် ကေသီ့ကို တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် ပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး “ကေသီ ရယ် မောင်တို့ ၂ယောက်လုံးဟာ ခုလို အချစ်တွေ တဖြေးဖြေး လျော့ပါး လာတာကို သတိမမူမိ ခဲ့ကြဘူး။ စောစောကသာ သတိထားမိခဲ့ကြရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ” လို့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ ခြံရှေ့မှာ ကေသီရဲ့ ကိုယ်လေးကို ချလိုက်ပြီး ကားတံခါး ကိုတောင် သေချာ မပိတ်နိုင်တော့ဘဲ ကားကို အလောတကြီး မောင်းထွက် လာခဲ့ မိပါတော့တယ်။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော် ကြန့်ကြာလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ နှောင့်နှေးနေတာမျိုး မဖြစ်ချင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ထပ်ပြီး ယိမ်းယိုင်သွားတာမျိုးလည်း အဖြစ်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ အမြန်မောင်းလာတဲ့ ကားကို ဂျူလီရဲ့ တိုက်ခန်းအောက်မှာ အသံမြည်အောင် ထိုးရပ်လိုက်ပြီး တိုက်ခန်း လှေကားထစ်တွေပေါ်ကို ကမူးရှူးထိုး အပြေးကလေး တက်လာခဲ့မိပါတယ်။ အခန်းရှေ့ရောက်လို့ တံခါးကိုခေါက်လိုက်တဲ့အခါ ပြုံးချိုတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ တံခါး လာဖွင့်ပေးတဲ့ ဂျူလီကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်း အခန်းထဲကို လှမ်းမဝင်နိုင်ဘဲ ဂျူလီ့ကို အလောတကြီး ပြောချလိုက်မိတာက “ဂျူလီ ကိုယ်ပြောတာ သေချာနားထောင်ပါ။ ကေသီနဲ့ ကွာရှင်းဖို့ကိစ္စ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး.” ကျွန်တော့်  စကားကို ကြားလိုက်တဲ့ ဂျူလီဟာ အံ့သြသွားတဲ့ မျက်နှာနဲ့ “ဟင်.. ကို ဘာတွေပြောနေ တာလဲ..နောက်နေတာလား။ ကြည့်စမ်းပါဦး မျက်နှာလဲမကောင်းဘူး.. ကို ဖျားနေတာလား” လို့ ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်တော့် နှဖူးကို သူ့လက်ကလေးနဲ့ လာစမ်းလိုက် ပါတယ်။
ကျွန်တော်က သူ့လက်ကို ဖယ်လိုက်ရင်း “ကိုယ်နောက်နေတာ မဟုတ်ဘူးဂျူလီ.. တကယ် ပြောနေတာ။ ဆောရီးပါ ဂျူလီ။ မင်းအတွက် ကိုယ်ဝမ်းနည်းပါတယ် ဆိုတာကလွဲလို့ တစ်ခြားလဲ ကိုယ် မပြောတတ်တော့ဘူး။ ကေသီနဲ့ ကွာရှင်းဖို့ဆိုတာ ကိုယ် တကယ်ကို မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ်နဲ့ ကေသီတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ဟာ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ ကောင်းခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ။ အိမ်ထောင်သည် ဘ၀မှာ ဆက်လက်ရှိရမဲ့ အကြင်နာတွေ၊ ကရုဏာတွေ၊ ဂရုစိုက်နွေးထွေးမှုတွေကို ကိုယ်တို့ မေ့လျော့ခဲ့ကြတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ တစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ တစ်ယောက်က မရှိကြတော့လို့ မဟုတ်ကြပါဘူး.။ ဒါကို ကိုယ်တို့၂ယောက် ခွဲရတော့မယ်ဆိုမှ နားလည်လာတယ်.. တန်ဖိုးထားရမှန်း သိလာတယ်။ ကိုယ် ကေသီကို မထားခဲ့နိုင်တော့ဘူး။ ကိုယ် အသက်ကြီးတဲ့အထိ ကေသီဟာ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ရှိရမဲ့သူဘဲ ဆိုတာ ကိုယ် ခွဲခြား နားလည်သွားပြီ။ ဒါကြောင့် မင်းအတွက် ၀မ်းနည်းပါတယ် လို့ဘဲ ကိုယ်ပြောပါရစေ ဂျူလီ။ ကိုယ့်ကို ခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့”
ကျွန်တော့်ရဲ့ စကားဆုံးသွားတော့မှ ကျွန်တော် အလေးအနက် ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဂျူလီဟာ သိသွားပုံရပါတယ်။ အိပ်ရာက ရုတ်တရက်နိုးလာတဲ့သူလို ယောင်ယောင်ကန်းကန်း ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေရာကနေ သူရဲ့ လက်တစ်ဖက်ဟာ လေထဲကို မြောက်တက်သွားတာ ကျွန်တော် မြင်လိုက်ပါတယ်။ ဂျူလီဘာလုပ်တော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သိလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှောင်လွဲဖို့ မကြိုး စားတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အပြစ်အတွက် ဒီလောက်တော့ ထိုက်တန်ပါတယ်။ မရှောင်ဘဲ ငြိမ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပါးပြင်ပေါ် ဂျူလီရဲ့ လက်ဝါးက အရှိန်ပြင်းပြင်း ကျလာ ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မျက်နှာ လည်ထွက်သွားပြီး အနောက်ဘက်ကို ယိုင်သွားခဲ့ပြီး ဂျူလီက အခန်းထဲ ကို ပြန်ဝင်လိုက်ကာ တံခါးကို ဝုန်းခနဲ မြည်အောင် ဆောင့်ပိတ် လိုက်ပါတော့တယ်။ တံခါးရဲ့ ဟိုတစ်ဖက် မှာတော့ ရှိုက်ကြီး တငင် ငိုကြွေးလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဂျူလီရဲ့ ငိုသံတွေကို လစ်လျူရှု ကြောခိုင်း လိုက်ပြီး အောက်ထပ်ကို ပြန်ဆင်းလို့ ကားပေါ်တက်ကာ ကုမ္ပဏီကို ဦးတည် မောင်းထွက်ခဲ့ ပါတော့တယ်။
ကားမောင်းလာရင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ကားကိုရပ်လိုက်ပြီး ကေသီ ကြိုက်တတ်တဲ့ နှင်းဆီ အဖြူ ဆွတ်ဆွတ်လေးတွေနဲ့ ပန်းစည်းလှလှလေး တစ်စည်းကို ညနေ ရုံးဆင်းချိန်မှာ လာယူမဲ့ အကြောင်းပြောပြီး အော်ဒါ မှာလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင် ဝန်ထမ်းကောင်မလေးက ပန်းစည်းပေါ်ချိတ်မဲ့ ကဒ်ပြားမှာ ဘယ်လို ရေးချင်ပါသလဲလို့ လှမ်းမေးပြီး ကျွန်တော့်ကို စာရွက်အကြမ်းတစ်ရွက် လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော်က တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီး စာရွက်ပေါ် ချရေးလိုက်တာက “ မောင်တို့ ၂ယောက်လုံး အိုမင်းလာတဲ့အချိန်ထိ မောင် မင်းကို ပွေ့ချီသွားမှာပါ.” ဆိုတဲ့ စာသားလေးပါ။ ညနေရုံးဆင်းပြီး အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဒီပန်းစည်းလေးကို သူ့လက်ထဲ ထည့်လိုက်တဲ့အခါ ပန်းစည်းပေါ်က စာသားလေးကို ဖတ်လိုက်ရရင် ကေသီ ဘယ်လောက်များ ပျော်ရွှင်သွားမှာ ပါလိမ့်။ တွေးလိုက်မိ တာနဲ့တင် ကြည်နူးမှုလှိုင်းတွေ တစ်လိမ့်လိမ့် တက်လာပြီး ကျွန်တော့် ရင်ခုန်သံတွေကလည်း မင်္ဂလာဦး နေ့တုန်း ကလို မြန်ဆန် နွေးထွေး လာပါတော့တယ်။
@@@@@@ ပြီးပါပြီ @@@@@@@
ချစ်သူတိုင်း နားလည်စာနာခြင်း၊ နွေးထွေးယုယခြင်း၊ ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းတို့ဖြင့် တွဲလက် ခိုင်ခိုင် မြဲနိုင်ကြ ပါစေရှင်။
The Divorce ( Unknown Author) ကို နှစ်ခြိုက်မိသဖြင့် ဘာသာပြန် ခံစားရေးဖွဲ့ပါသည်။ အခြားသူများ ဘာသာပြန်ထားပြီးခဲ့ပါက တိုက်ဆိုင်မှုအတွက် ခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုတင် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။ ဒီဝတ္ထုလေး ဖတ်ပြီးချိန်မှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ခံစားမိသောကြောင့် စာဖတ်သူများကိုလည်း ဒီဝတ္ထုကနေ တစ်စုံတစ်ရာ ရစေလိုသောစိတ်ဖြင့် ပြန်လည် ဝေမျှ ခံစားနိုင်ရန် ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ဖြစ်ပါတယ်.။
(ဒီပိုစ့်ဟာ အခုရေးတဲ့ အသစ်မဟုတ်ဘဲ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က ရေးခဲ့ပြီး ဘလောဂ့်ပေါ် တင်ခဲ့တဲ့ ဘာသာပြန် ဝတ္ထုလေးပါ။ ခင်မင်ရသော ညီမငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းဆို ချက်ကြောင့် ပြန် တင်ပေးခြင်း ဖြစ် ပါတယ်ရှင်.. )
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, September 28, 2011 Wednesday, September 28, 2011 Labels: ဘာသာပြန် ခံစားမှု ၀တ္ထုများ
သူမ ရောက်လာတာ့မည့်အချိန် နီးကပ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့် ရေတပ်ဗိုလ်လေး John Blanchard သည် ခုံတန်းလေးပေါ်ကနေ ထလိုက်ကာ သူ၏ ယူနီဖောင်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆန့်လိုက်ပြီး Grand Central Station ရှိရာကို ဦးတည်ကာ လာနေကြတဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက လူစုများဆီ လှမ်းကြည့်နေမိသည်။ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းတို့က အထင်းသား ပေါ်လွင်လို့ နေမှာကို သူကိုယ်တိုင် သိရှိနားလည်နေသည်။ သူမျှော်နေတာက နှင်းဆီပန်းကလေးတစ်ပွင့်အား ရင်ဘတ်မှာ ထိုးလာမည့် မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ဖြစ်လေသည်။ အရှင်းဆုံးဆိုရလျှင် နှလုံးသားချင်း ရင်းနှီးစွာ နားလည်မှုကိုယ်စီ ရရှိထားခဲ့ပြီးသော်လည်း မျက်နှာခြင်း တစ်ခါမှ မဆုံဖူးသေးသော မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို သူ စောင့်မျှော်နေခြင်းသာပါ…
ထိုမိန်းခလေးသည် ဘယ်ကဲ့သို့မျက်နှာမျိုး၊ ဘယ်လိုအသွင်သဏ္ဍာန်မျိုး ရှိလေမည်လဲ သူမခန့်မှန်းနိုင်ပါ. သို့သော် သေချာတာက သူတို့နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်အသည်းနှလုံး တစ်ယောက် ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်ခဲ့ကြပြီး လူမမြင်ဖူးကြဘဲ တွယ်တာနေကြသူနှစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေလေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ယခုကဲ့သို့ လူချင်းမမြင်ဖူးကြဘဲ ရင်းနှီးတွယ်တာသွားခဲ့ကြသည်မှာ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်ကျော်ကာလက ဖလော်ရီဒါရှိ စာကြည့်တိုက်တစ်ခုသို့ John Blanchard ရောက်ရှိခဲ့သည်မှ အစပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုရပါမည်။
စာကြည့်တိုက်အတွင်း စာအုပ်များ ရှာဖွေရန်ရောက်ရှိနေခဲ့သော သူသည် စာအုပ်စင်ပေါ်က စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို လှမ်းယူလိုက်ပြီး စာမျက်နှာများကို လှန်လှော ကြည့်လိုက်မိသည်တွင် စာမျက်နှာများပေါ်ရှိ တစုံတရာက သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသွားစေခဲ့သည်။ ထို တစုံတရာမှာ စာအုပ်အတွင်းရှိ စာများမဟုတ်သလို၊ စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာများလည်း မဟုတ်ခဲ့ပါ။ စာအုပ်တွင်းရှိ စာမျက်နှာများ၏ ဘေးလိုင်း အနားတွင် ခဲတံဖြင့် ဖွဖွလေး ရေးခြစ် မှတ်သားထားခဲ့သော လှလှပပ လက်ရေးကလေးများက သူ့စိတ်အာရုံတစ်ခုလုံးကို ဆွဲညို့လို့ သွားခဲ့လေသည်။ လက်ရေးကိုကြည့်သည်နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော မိန်းခလေးတစ်ယောက်၏ လက်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလည်း သူ့စိတ်ထဲတွင်လည်း သေချာလို့နေခဲ့သည်။
စာအုပ်ရှေ့မျက်နှာစာကို သူရှာဖွေကြည့်မိတော့ ထိုစာအုပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ၏ နံမည်နှင့် လိပ်စာကို ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ စာအုပ်ပေါ်တွင် မိန်းခလေးနံမည် Hollis Maynell ဟုရေးထားပြီး ရက်စွဲနှင့် သူမ နေထိုင်ဟန်ရှိသည့် နယူးယောက်မြို့ရှိ လိပ်စာတစ်ခုကို တွေ့ရလေသည်။ ထို့နောက်တွင် John Blanchard သည် ထိုလိပ်စာရှင် Hollis Maynell ထံ သူ့အကြောင်းသူ မိတ်ဆက်ထားသည့် စာတစ်စောင်ကို ရေးပို့လိုက်ပြီး စာထဲတွင် သူ့အားခင်မင်ပါရန်နှင့် သူ၏ ခင်မင်မှုအား လက်ခံအသိအမှတ် ပြုသည်ဆိုပါက စာပြန်ရန် တောင်းဆိုထားခဲ့သည်။ သို့သော် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားနေသော အချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုစာကို စာတိုက်ကနေ ထည့်လိုက်ပြီး နောက်တစ်နေ့တွင် သူတာဝန်ကျသော သင်္ဘောနှင့်အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ မဟာမိတ်တပ်များ ထိုးစစ်ဆင်နွဲနေရာ ဥရောပစစ်မျက်နှာသို့ ထွက်ခွာလာခဲ့ရသည်။
စစ်မြေပြင်တွင် ကြာခဲ့သည့် တစ်နှစ်နှင့် တစ်လအတွင်း လိပ်စာပါ ထိုမိန်းခလေးနှင့် အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စာချင်း ဆက်သွယ်ရင်းနှီးရာမှ တစ်စောင်ထက်တစ်စောင် သံယောဇဉ်ပိုတိုးလာခဲ့သလို၊ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်လည်း ပိုသိလာခဲ့ကြသည်။ စာတစ်စောင်ချင်းစီသည် နှလုံးသားမှ သံယောဇဉ် အချစ်ပန်းများ ဖူးပွင့်ရှင်သန်လာစေသည့် မြေသြဇာပမာ ဖြစ်လာကာ လူချင်း မမြင်ဖူးကြသေးသော်လည်း တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူတို့နှစ်ဦးသား ရင်ထဲတွင် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သံယောဇဉ် ငြိတွယ်မိခဲ့ကြတော့သည်။
စာချင်းခင်မင်ရင်းနှီးလာပြီး အချိန်အတော်ကြာလာသည့်တစ်နေ့ John Blanchard က စာထည့်လျှင် မိန်းခလေး၏ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံပါ ထည့်ပေးပါရန် သူမအား တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း မိန်းခလေးက ပို့ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ John Blanchard သည် သူမအား နှလုံးသားဖြင့် တကယ်နှစ်သက် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသည်ဆိုပါက သူမ မည်သည့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေပါစေ ချစ်နိုင်ရမည်ဟု သူမက တုံ့ပြန်သဖြင့် John Blanchard သည် နောက်တစ်ကြိမ် ဓာတ်ပုံမတောင်းဖြစ်တော့ပေ။
ဥရောပတွင် တစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးနောက် အမေရိကသို့ John Blanchard ပြန်လာရချိန်တွင် သူတို့နှစ်ယောက်၏ ပထမဦးဆုံး ဆုံတွေ့ကြမည့် နေရာကို နယူးယောက်မြို့ Grand Central Station ကြီးရှေ့တွင် ညနေ ၇နာရီတိတိတွင် ဆုံကြမည်ဟု ချိန်းဆိုထားကြသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ဆုံတွေ့ချိန်တွင် သူမအား John Blanchard က အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ရန် သူမ၏ ကုတ်အင်္ကျီရင်ဘတ်ပေါ်တွင် အနီရောင်နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကို ထိုးစိုက်လာခဲ့မည်ဟု မိန်းခလေး၏ စာထဲတွင် ရေးထားခဲ့သေးသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း John Blanchard တစ်ယောက် Grand Central Station ရှေ့က ခုံတန်းပေါ်တွင် ထိုင်ကာ ၇နာရီထိုးမည့်အချိန်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာနှင့် စောင့်မျှော်နေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ ချစ်ခင်တွယ်တာနေမိသော မိန်းခလေးသည် ဘယ်ကဲ့သို့ မျက်နှာမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားမည်နည်၊ ဘယ်ကဲ့သို့သော ပုံစံမျိုးလေး ရှိမည်နည်းဟု တစ်နှစ်ကျော်ကျော် သူမှန်းဆကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။ ယခုအချိန်တွင် သူမှန်းဆကြည့်ခဲ့သော မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရပေတော့မည်။ ယခု ညနေ ၇နာရီထိုးပြီဖြစ်၍ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှပင် မမြင်ဖူးသေးသည့် သူချစ်ရသော သူမ လာမည့်လမ်းကို မှန်းမျှော်ကြည့်ရင်း ခြေဖျား လက်ဖျားများပင် အေးစက်လာသည်ကို ခံစားမိလေသည်။
ထိုအချိန်လေးမှာပင် အရပ်ရှည်ရှည် သွယ်လျလျ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦး ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ လျှောက်လှမ်းလာသည်ကို သူတွေ့လိုက်ရသည်။ သူမ၏ ရွှေဝါရောင်ဆံနွယ်လေးများက နားရွက်နားဆီမှ အခွေခွေ အလိပ်လိပ်လေးဖြင့် ကျောပြင်ပေါ် လှပစွာ ဝဲဖြာကျနေခဲ့ပြီး သူမ၏ မျက်ဝန်းလေးများကတော့ ပန်းပွင့်လေးများ ပမာ ပြာလွင်တောက်ပလို့နေသည်။ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများမှာ နီရဲစိုထွေးနေပြီး မေးစေ့သွယ်သွယ်လေးနှင့် ချိုရွှင်နေသော ဖြူစင်ဝင်းပနေသည့် မျက်နှာလေးက လန်းဆန်းတောက်ပသော အသရေတစ်မျိုးဖြင့် တင့်တယ်လို့နေသည်။ သူမ ဝတ်ဆင်လာသော အစိမ်းဖျော့ဖျော့ ဝတ်စုံလေးက နွေဦးရာသီနတ်သမီးလေး သက်ရှိထင်ရှား ကိုယ်ထင်ပြသလား ထင်မှတ်ရအောင် လင်းပ ဝင်းဖြာလို့နေသည်။ လှလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း...
ရုတ်တရက် သူမ၏ အလှရေယဉ်ကြောမှာ မှင်သက်မိအောင် မျှောပါသွားခဲ့ပြီးမှ သတိပြန်ဝင်လာကာ အပြေးအလွှား သွားရောက်ကာ သူမရှေ့တွင် ရပ်လိုက်မိတော့သည်။ သူ၏ သတိလက်လွတ်မှုက မိန်းခလေး၏ အင်္ကျီပေါ်တွင် အနီရောင်နှင်းဆီတစ်ပွင့် ရှိနေသည်၊ မရှိနေသည်ကိုပင် ကြည့်ဖို့ကိုပင် သူ လုံးလုံး မေ့လျော့သွားခဲ့မိအောင် မိန်းခလေး၏ အလှက သူ့ကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်း လွန်းခဲ့သည်။ သူမရှေ့တွင် သူရပ်လိုက်မိသောတခဏ မိန်းခလေး၏ မျက်ဝန်းများပေါ်တွင် ခပ်ပါးပါး အပြုံးရိပ်ရိပ်လေးတစ်ခုကို သူမြင်လိုက်ရသည်.. ထို့နောက်တော့ သူမသည် နှုတ်ခမ်းလေး ခပ်ကော့ကော့လေးဖြစ်အောင် လှလှပပလေး ပြုံးလိုက်ပြီးနောက် "ကျွန်မကို လမ်းဖယ်ပေးပါ.. ရေတပ်ဗိုလ်ကလေး၊ ကျွန်မ ရှင့်ကို မသိဘူး ထင်ပါတယ်နော် " ဟု ညင်သာသိမ်မွေ့သော အသံလေးဖြင့် သူ့အား ပြောလိုက်လေတော့သည်။ သို့သော်လည်း သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းကင်းမဲ့စွာ သတိလက်လွတ်ဖြင့် ထို မိန်းခလေးအနားသို့ နောက်ထပ် ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းကာ ပိုမိုနီးကပ်အောင် တိုးသွားမိသောအချိန်တွင် သူ့မြင်ကွင်းထဲသို့ နှင်းဆီပန်း အနီရောင်တစ်ပွင့်ကို ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် ထိုးစိုက်ထားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မိန်းခလေး၏ အနောက်နားတွင် ကပ်လျှပ် ပေါ်ထွက်လို့လာသည်။
အိုး.. သူ့ရှေ့က အစိမ်းနုရောင်ဝတ်စုံနှင့် မိန်းခလေးသည် သူတွေ့ချင်နေသော Hollis Maynell မဟုတ်ပါဘဲလား။ သူမလေး၏ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် မည်သည့်နှင်းဆီပန်းမှ ရှိမနေခဲ့ပါ။ ထိုခဏမှာပင် သူ့ရင်ထဲတွင် အဖိုးတန်ဆုံးသော တစုံတရာ ဆုံးရှုံးသွားသလို ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ခံစားမိရလေတော့သည်။ နှင်းဆီပန်းလေး ထိုးထားကာ နောက်မှရောက်လာသော အမျိုးသမီးကသာလျှင် Hollis Maynell ဖြစ်လေသည်။ သို့သော် ထိုအမျိုးသမီသည် သူ ထင်မှတ်ထားခဲ့သလို ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် လှလှပပ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အသက် လေးဆယ်ကျော်အရွယ် ခပ်ဝဝ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်နေလေသည်။ ခေါင်းပေါ်တွင် အသက်ကြီးကြီး အမျိုးသမီးများကြိုက်တတ်သည့် ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားပြီး ဦးထုပ်အောက်တွင် ငွေရောင်ဆံပင်များကို ထွက်ပေါ်နေသည်ကို မြင်တွေ့နေရသည်။ အမျိုးသမီး ဝတ်ဆင်ထားသော စကပ်အောက်မှ ခြေသလုံး တုတ်တုတ်များကိုပင် အထင်းသား တွေ့မြင်နေရလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ့ရှေ့တွင် အစောကရှိခဲ့သော အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံပိုင်ရှင် မိန်းခလေးမှာ ခပ်ဝေးဝေးသို့ပင် ရောက်ရှိသွားခဲ့လေပြီ။
ထိုတဒင်္ဂလေးတွင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်အား နှစ်ကိုယ်ခွဲကာ တစ်ကိုယ်အား အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနှင့် မိန်းခလေးနောက်သို့ လိုက်သွားချင်မိပြီး နောက်တစ်ကိုယ်မှာ ယခု သူ့ရှေ့တွင် ရောက်နေသည့် သူနှင့် စာချင်းအဆက်အသွယ်ဖြင့် သံယောဇဉ်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးအား နှုတ်ဆက်စကား ဆိုရမည့် အသိစိတ်တို့ဖြင့် ဝေခွဲမရ ဖြစ်နေလေမိသည်။ အနီရောင်နှင်းဆီပွင့်ကို ထိုးစိုက်ထားသော အမျိုးသမီးသည် ခပ်ဝဝဖြစ်သော်လည်း နွေးထွေးကြင်နာတတ်မည့် မိခင်တစ်ယောက်၏ မျက်နှာသွင်ပြင်မျိုးရှိပြီး ခဲသားရောင်မျက်ဝန်းများကလည်း အကြင်နာတရားဖြင့် တောက်ပနေခဲ့သည်။ ဖြူဖျော့သော်လည်း သိမ်မွေ့ဟန်ရှိသည့် မျက်နှာပြင်ကတော့ ရင့်ကျက်ခြင်းများဖြင့် တည်ငြိမ်နေလေသည်။ သူသည် လက်ထဲတွင် ဆုပ်ကိုင်ထားသော Hollis Maynell ၏ လက်ရေးများရှိနေသည့် အပြာရောင် သားရေဖုံး စာအုပ်လေးကို ထုတ်လိုက်ကာ သူတို့နှစ်ယောက် တွေ့ဆုံခြင်း၏ သက်သေအဖြစ် အမျိုးသမီးလက်ထဲသို့ ထည့်ပေးလိုက်လေသည်။
မိခင်အရွယ် ထိုအမျိုးသမီးသည် သူ့အတွက် ချစ်သူတစ်ယောက် မဖြစ်လာနိုင်သော်ငြားလည်း အဖိုးတန် မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် သို့မဟုတ် ချစ်သူအဖြစ်ထက် ပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိသော ခင်မင်တွယ်တာခြင်းမျိုးနှင့် ဆက်လက် ခင်မင်နိုင်ကြသေးသည်ဟု သူက ယူဆမိပါသည်။ ထို့နောက်တော့ သတိအနေအထားဖြစ်အောင် ကိုယ်ခန္ဓအား ပြင်ရပ်လိုက်ပြီး ထိုအမျိုးသမီးကို အလေးပြုလိုက်ကာ သူ့ရင်ထဲက တစ်နှစ်ကျော် ခံစားခဲ့ရသော သံယောဇဉ်၊ တွယ်တာချစ်ခင်ခြင်းများ၊ ပျက်ပြယ်သွားသော မျှော်လင့်ချက်တို့ကြောင့် နာကျင်ကြေကွဲခြင်းများ တို့ဖြင့် ဆို့နင့် မွန်းကျပ်နေသော်လည်း တည်ကြည်လေးနက်သော ယောက်ျားကောင်းပီသစွာဖြင့် ထိုအမျိုးသမီးအား စကားပြောရန် အားထုတ်ရပါတော့သည်။
"ကျွန်တော်က ရေတပ်အရာရှိ John Blanchard ပါ။ ခင်ဗျားက Hollis Maynell ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့နော်။ ခုလို တွေ့ဆုံရတာ သိပ်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ညစာ လိုက်ကျွေးပါရစေ ခင်ဗျာ"
သူ့စကားအဆုံးတွင် အမျိုးသမီး၏ မျက်နှာပြင်သည် ပြည့်ဝ သဘောကောင်းသော အပြုံးစဖြင့် တောက်ပလာလေသည်။ ထို့နောက် "မင်းတို့ချင်း ဘယ်လိုကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာ အန်တီမသိပါဘူးကွယ်။ ဒါပေမဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်က အန်တီရဲ့ ကုတ်အင်္ကျီပေါ်မှာ ဒီနှင်းဆီပန်းကလေး ထိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ပြောပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ သားကသာ အန်တီ့ကို ညစာ ဖိတ်ကျွေးဖို့ ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် ဆိုခဲ့ရင် ဒီလမ်းရဲ့ တစ်ဖက်က စားသောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုမှာ အဲဒီမိန်းခလေးက သားကို စောင့်နေတဲ့အကြောင်းကိုပါ အသိပေး ပြောပြဖို့လည်း မှာလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း သူက ဒါဟာ သားလေးကို စမ်းသပ်တဲ့ နည်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါသေးတယ်။ အဲဒီမိန်းခလေးကတော့ ခုနတင် ဒီရှေ့နားကနေ သွားလိုက်တဲ့ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနဲ့ မိန်းခလေးပါ။ ကဲသားရေ. ဒီနှင်းဆီ အနီရောင်လေးကို ယူပြီး မိန်းခလေးဆီ အမြန်ဆုံး သွားပေတော့ကွယ်"
အမျိုးသမီး လှမ်းပေးလိုက်သော အနီရောင်နှင်းဆီလေးကို သူ တယုတယ ကိုင်ဆောင်ကာ အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံနှင့် မိန်းခလေး စောင့်နေမည့် စားသောက်ဆိုင်ရှိရာဆီသို့ ခြေလှမ်းများကို ဦးတည်လိုက်လေသည်။ ထိုခဏခြင်းမှာပင် မှောင်ရီသန်းကာစ ညခင်းချိန်ခါသည်ပင် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ကြောင့် လှလှပပလေး လင်းလက်ဝင်းဖြာ လဲ့ရီနေသည်ဟု ထင်မိလေတော့သည်။
A Test of Love (Author Unknown) ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။